Guardiola oo ka hadlay xaallada dhaawacyada xiddigaha Aguero iyo Sané kahor kulanka Sheffield Wednesday – Gool FM
Guardiola oo ka hadlay xaallada dhaawacyada xiddigaha Aguero iyo Sané kahor kulanka Sheffield Wednesday
Dajiye March 3, 2020
(Manchester) 03 Mar 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay horumarkii ugu dambeeyay ee la xiriira xaalada ciyaartoydiisa, kahor kulanka habeen dambe ee Arbacada ay kula ciyaari doonaan Sheffield Wednesday koobka FA Cup.
Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in Leroy Sané uusan diyaar u aheyn weli inuu ka qeyb qaato kulanka habeen dambe ee Arbacada ay kula ciyaari doonaan Sheffield Wednesday ee koobka FA Cup, sidaas darteed looguma yeerin inuu ciyaaro ilaa iyo inta laga xaqiijinayo inuu diyaar u yahay kulamada waa weyn.
Leroy Sané ayaa ka soo kabtay dhaawacii uu garoomada kaga maqnaa mudo dhan 6 bilood, isagoo u ciyaaray 57 daqiiqo kooxda Man City oo ay da’doodu ka yar tahay 23 sano jirada kulankii xalay ay la ciyaareen Arsenal.
Pep Guardiola ayaa shir jaraa’id uu maanta ka soo muuqday wuxuu ku sheegay:
“Ilaa iyo laga sheegayo inuu diyaar u yahay Leroy Sané 100% sidoo uu markii hore ahaa, kaddib waxaan ugu yeeri karaa inuu ciyaaro”.
Intaas kaddib Pep Guardiola ayaa ka hadlay dhaawaca Sergio Aguero ee ka soo dhaafay dhanka Jilibka kulankii Aston Villa ayaa wuxuu yiri:
“Wuu fiicanyahay wuxuuna diyaar u yahay inuu ka qeyb qaato kulanka habeen dambe, Claudio Bravo isna wuu fiicanyahay wuuna nala joogi doonaa kulanka Sheffield Wednesday”.
Xiddigga ugu xooggan khadka dhexe ee uu wajahay, laacibka uu jeclaan lahaa inuu ka garab ciyaaro & Dhowr arrimood oo uu ka hadlay Lukaku
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Chelsea iyo Liverpool ee koobka FA Cup-ka oo la shaaciyay